भोटेघुम्तीमा खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगीता हुने - Pradesh Dainik
भोटेघुम्तीमा खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगीता हुने
बुधबार, बैशाख ०८, २०७८ , प्रदेश दैनिक
पथरी, मोरङको पथरी शनिश्चरे ५ भोटेघुम्तीमा पुरुष खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगीता हुने भएको छ ।
नयाँवर्ष २०७८ र रामनवमीको अवसर पारेर फुटबल प्रतियोगीता गर्ने तयारी गरेको आयोजक समितिका अध्यक्ष खड्ग कुमार (सन्तोष) थापाले जानकारी दिए । स्थानीय रामजानकी युवा क्लवले व्यवस्थापन गरेर आयोजना गर्न लागिएको फुटबल खेलको उद्घाटन आज रामनवमीको अवसर पारेर गर्ने तयारी रहेको थापाले जानकारी दिए ।
बैशाक १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने खेलमा १२ वटा टिम सहभागी हुनेछन् । आजको उद्घाटन खेल बि.एस.सी. आयोजक टिम र रोयल फुटबल क्लव दमक बिच हुने छ । खेलमा बि.एस.सी. आयोजक टिम, रोयल फुटबल क्लव दमक, शान्ति स्पोर्टिङ क्लव सुन्दरीचौक, हनुमान स्पोर्टिङ क्लव पथरी शनिश्चरे १, लालभित्ती फुटबल क्लव बेलबारी, पाञ्चायन फुटबल क्लव इटहरी, राजघाट फुटबल क्लव उर्लाबारी, बि.वाइ.सी. भाउन्ने, हिमाल युनाइटेड क्लव बिहिबारे, वाइ.एफ.सी. पथरी सिविर, सि.वाइ..सी पथरी सिविर र अमरदह युवा क्लव सुनवर्षी सहभागी हुने भएका छन् ।
खेलको बिजेताले नगद ५१ हजार र उपबिजेता टिमले नगद २५ हजार सहित ट्रफि, मेडल र प्रमाण–पत्र हात पार्नेछन् । खेल सम्पन्न गर्नका लागि आयोजक कमिटिले ४ लाख ११ हजार बराबरको खर्च हुने अनुमान गरेको छ । खेल पथरी शनिश्चरे ५ र ३ को सिमानामा पर्ने रामजानकी मन्दिर परिसरको खेल मैदानमा हुने छ ।
रामनवमी मेला पनि आजै
खेल मैदान परिसरमा रहेको रामजानकी मन्दिरमा आजकै दिन मेला लाग्ने गरेको छ । वर्षैँ देखि लाग्दै आएको मेला कोरोना कहरका करण अघिल्लो वर्ष लाग्न पाएन । यो वर्षपनि सामान्य पुजाआजा मात्रै गर्ने व्यवस्थापन गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
पुजा गर्नका लागि आउने दर्शनार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिती हुने गरेको यस मन्दिरमा अहिले जेरी, मिठाइ लगायतको सामान्य मेला समेत लागेको छ । सरकारले २५ जनाभन्दा वढि भिडभाड हुने काम नगर्न सूचना जारी गरेको छ । प्रहरी प्रशासनले मेला नलगाउन समेत सूचना गरेको जानकारी आएको छ । गाउँघरमा लाग्ने यस्ता मेलाहरुमा रोक लगाएता पनि सरकारी पक्षबाट भने दिनहु सयौँको संख्यामा भेला भएर कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छन् ।